Sawirro: Wafdi ka socda Dowlada Federaalka oo Cadaado soo gaaray - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Sawirro: Wafdi ka socda Dowlada Federaalka oo Cadaado soo gaaray
Sawirro: Wafdi ka socda Dowlada Federaalka oo Cadaado soo gaaray
May 2, 2017 May 2, 2017 admin575
Wafdi ka socda dowlad federaalka ah ayaa galabta soo gaaray Magaalada Cadaado, oo beri la filayo in ay ka dhacdo doorashada Madaxweynihii labaad oo ay yeelato dowlad goboleedka Galmudug.
Wafdigaan ayaa waxaa hogaaminayey wasiirka arimaha gudaha iyo federaalka Mudane Cabdi Faarax Siciid Juxa, waxaana ku wehliya safarka Wasiirka howlaha guud Xirsi Rooble, Wasiir ku xigeenka Xanaanada xoolaha C/kariin Khaliif Dhalac, wasiir dowlaha Howlaha Guud Axmed Cabdi kaariye iyo xildhibaano federaalka ah.
Wafdigaan ayaa Cadaado u yimid sidii ay uga qeybgali lahaayeen doorashada Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo beri ka dhacaysa Magaalada Cadaado. waxaana xarunta Madaxtooyada ku soo dhaweeyey Madaxweynaha ku xigeenka Galmdug Maxamed Xaashi.
Cadaado ayaa marti galinaysa doorashada Madaxweynihi labaad oo ay yeelato Galmudug, waxaana ku tartamaya saddex musharax oo kala ah Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Axmed Cali Hilowle iyo Prof C/qaadir Maxamed Shirwac.
Sawirro: Madasha Dardargalinta Waxqabadka Xukuumadda
Natiijada Codeynta Baraha Bulshada Doorashada Galmudug
Soomaaliland oo dad shacab ah ku xir xirtay Laas-caanood
September 10, 2019 Duceysane
Sawirro: Madaxweyne Farmaajo oo gaaray dalka Qatar
Odayaasha Guriceel oo ka garaabay dadkii lagu dilay BalliWasaq (Video)